राशिअनुसार प्रेम सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ ? « News24 : Premium News Channel
६ माघ २०७४, शनिबार
राशिअनुसार प्रेम सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ ?
एजेन्सी । राशिको स्वभावका आधारमा सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । कतिपयलाई त कोतुहुल्ता होला कुन राशिसंग बिबाह गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा । तपाईको राशिले निर्धारण गर्छ कस्तो साथी पाउनुहुन्छ ।
जुन मान्छेको राशि मेष हो उसको लागि मेष, सिंह या धनु राशि हुनेहरुसँगको सम्बन्ध बलियो हुन्छ । यिनीहरूबीचको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । मेष राशि हुने व्यक्तिका लागि कुम्भ, तुला या मिथुन राशि हुने साथी सामान्य रहन्छन् ।
यीनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । वृष, कन्या या मकर राशि हुने मानिसकासँग मेष राशिको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ । मेष राशि हुने मानिसको लागि वृश्चिक, मीन या कर्कट राशिका साथी उत्तम मानिँदैन । यीनीहरुका बीचको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ ।
वृष राशि हुने व्यक्तिका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी श्रेष्ठ हुन्छ । यीनको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । यदि कुनै व्यक्तिको राशि वृष हो र उ कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका साथी रोज्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ ।
जो मानिसको राशि वृष हो उनको लागि मेष, सिंह, या धनु राशिका व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ । वृष राशिका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशि हुनेहरूका साथ जोडी राम्रो मानिदैन ।
जुन मानिसको राशि कर्कट हो उनको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिको साथी उत्तम हुन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम मानिन्छ । कर्कट राशिका मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी सामान्य हुन्छन् ।
यिनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन, तुला या कुम्भ राशिका मानिससँग कर्कट राशिको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ । कर्कट राशिका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशि हुनेहरु त्यति राम्रो मानिदैन । यिनीहरुको प्रेम प्रसंगको सफलताको सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ ।
सिंह राशिका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशिका साथी उत्तम हुन्छ । यिनका बीचको प्रेम सम्बन्ध सफल हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिको राशि सिंह हो र उ मिथुन,तुला या कुम्भ राशिका साथीसँग मित्रता राख्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहने छ ।
जनु मानिसको राशि सिंह हो, उसको लागि वृष, कन्या या मकर राशि के व्यक्तिका साथ प्रेम सम्बन्ध हुने सम्भावना ५०–५० हुन्छ । सिंह राशिका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिसंगको जोडी त्यती राम्रो हुँदैन ।
तुला राशिका मानिसका लागि मिथुन तुला या कुम्भ राशिका साथी सबैभन्दा उत्तम मानिन्छन् । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिका राशि तुला हो र उ मेष, सिंह या धनु राशिका साथी छनौट गर्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ ।
जुन मानिसको राशि तुला हो उनको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका व्यक्तिसँग प्रेमसम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०–५० हुन्छ । तुला राशिका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथ जोडी बन्नु बनाउनु त्यति राम्रो हुँदैन ।
जुन मानिसको राशि मकर हो ती मानिसका लाथि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । मकर राशिका मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका साथी सामान्य रहन्छन् ।
यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा निर्भर रहन्छ । मेष, सिंह या धनु राशि का मानिसका साथ सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ । मकर राशिका मानिसक लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशि सँगकोे सम्बन्ध राम्रो मानिदैन । प्रेम सम्बन्धको सफलता पनि एकदमै कम हुन्छ ।
जुन मानिसको राशि मीन हो उसको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका साथी उत्तम हुन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध पनि उत्तम हुन्छ । मीन राशिका मानीसका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी सामान्य हुन्छ ।
यिनीहरुको प्रेम प्रसंग आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन,तुला र कुम्भ राशिका मानिसका साथ मीन राशिको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० हुन्छ ।
मीन राशिका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशिका साथी त्यति उत्तम मानिदैन । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धको सफलताको सम्भावना एकदमै कम हुन्छ ।
कुकुर, काग, गाई र गोरु तिहारलाई विश्व दिवस बनाउन अभियान सुरु
काठमाडौं । तिहारका कुकुर, काग, गाई र गोरु पूजाका दिनलाई अन्तराष्ट्रिय (विश्व) दिवस घोषणा गराउन
बाढी–पहिरो र डुबानका कारण बेपत्ता भएकाको परिवारलाई २ लाख राहत